Su'aal: Bishintayda hoose waa gaduud sida biijada oo kale?
Author Topic: Su'aal: Bishintayda hoose waa gaduud sida biijada oo kale? (Read 51487 times)
« on: May 10, 2013, 09:18:18 PM »
waxan salamayaaa dhamaan somali doctors and members salan ka dib. waxaan muda badan isku arkayey bishinitayda hoose oo malinba malinta ka danbaysa so cadanaysay hada arag ahaan waxay u egtahay sidii qof biijo qaba lakin wax xanuuna ma leh nabarna ma aha lakiin midabkeedu waa red waxayna noqota inta badan dry markaasna waxaa ka kaca qolfo doctors badan wa la kulmay waxayna isiyeen dawoyin an korka ka mariyo lakin wax is bedela iskuma arag hada mudo 6years sidan wan ahay marki an wax walba kala calwayey farahan ka qaday habeenkii hada waxan mariyaa fasalin hadii anan laba habeen marin waxay noqon very dry qolotina way kacaysaa.
Re: Su'aal: Bishinta hoose waa gaduud sida biijada oo kale?
« Reply #1 on: May 15, 2013, 03:10:52 PM »
Faruuryaha oo dildillaaca oo qolfoof yeeshaan "Cheilitis" waa xaalad ka dhalato markii faruuryuhu qallaalaan kadibna dillaacaan maxaa yeelay badanaa faruuryaha waxaa dulsaaran xuub yar oo dufan leh oo eebbe ugu talagalay in uu subkiyo faruuryaha, haddii xuubkaas la waayo ama laga qaado faruuryaha ayaa dhibkaan la arkaa.
Calaamdaha faruuryaha dildillaaca waxaa ka mid ah:
- Faruuryo qalleel,
- Jeexjeex yar,
- Dubka oo ka fiiqmo.
Haddii dildillaaca uu weynyahay faruuryaha way dhiigaan xanuunne way keenaan.
Faruuryaha oo jeexjeema wax badan ayaa keeni karo laakiin waxaa ugu caansan faruuryaha jeexjeexmo xilliga qaboobaha.
Waxyaabaha kale ee caanka ah oo faruuryaha dillaaciya waxaa ka mid ah caadada faruur leefleefka taasoo xuubka dufanka leh ka qaaddo.
Waxaa kaloo keeni karo haddii jirkaaga ku yaryahaya fitamiinada iyo macdanta qaar ee jirka wax u tara.
Waxaa kaloo dildillaacin kara faruuryaha hawada kulul haddii ay tahay mid bannaanka ah ama mid gudaha caloosha ka soo baxdo, sida dadka qaba gaaska oo kale.
kareemka batroolka ka samaysan sida faasaliinta ayaa ah daaweyn ku meel gaar ah.
Dheecaannada wax burburiya ee calyada laga helo "enzymes" ayaa qaar waxay dhaawac u gaystaan faruuryaha oo dildillaaciyaan, taasne waxaa looga taxaddari karaa oo lagu daweyn karaa in aad joojisid haddii aad leedahay caadada faruuryaha in la leefo.
Dadka ay ku yaryihiin fitamiinada iyo macdanta jirka u baahan yahay waa in ay qaataan, dadka qabo gaaska ama cudur faruuryaha ku dhaca iyagane waa in alga daaweeyaa.
Guri Ku Daaweyn
Malabka waa daaweynta ugu fiican oo lagu daaweeyo faruuryo jeexanka, waa in faruuryaha la mariyo maadaama malabka uu subkayo uuna leeyahay maaddo la dagaallanto bakteeriyada.
Iska ilaali in aad cabto biyaha aashitada leh ama biyaha aad u qabow maadaama ay dhaawacaan faruuryaha.
Haddii ay jiraan daawooyin aad qaadato waxaa laga yaabaa in ay keenaan faruuryo dillaaca.
Jooji faruuryo leefleefka haddii ay caado kuu tahay.
Haddii aad qabtid gaas, fadlan iska daawey.
Haddii talooyinkaas wax is badal iskaga garan waysid la xiriir takhtar cudurada maqaarka ah si loo ogaado dhibaatada bishinta kaa haysato.
Halkaan ka akhriso cudurka Biijada
Views: 17697 June 13, 2015, 03:26:34 PM
Su'aal: Kaadi kaadi kale ka dambayso?
Started by CabdallahBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 2907 December 15, 2016, 11:42:14 AM
BARNAAMIJKA KA HORTAGGA SOA/AIDS – EE DADKA QAXOOTIGA AHI QAXOOTIGA KALE U SAME
Started by dr-awaleBoard Qaybta Wacyi Galinta
Views: 8411 December 16, 2008, 07:11:42 PM
Views: 14294 May 11, 2011, 04:28:24 PM
Views: 19357 December 23, 2010, 07:28:23 PM